Himalaya Dainik » थाहा छ ? दन्त मन्जनले दाँत मात्र होइन् अनुहार पनि चम्काउँछ !
– १ चम्चा बेकिंग सोडा र १ चम्चा मन्जन हाल्नुहोस्
– २ चम्चा पानी थप्नुहोस् र राम्ररी मिसाउनु होस्
यसले छालाको तेललाई नियन्त्रण गर्छ । हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस् । यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । केरा, मौसम, अन्डाको प्याकले अनुहारमा भएका दागहरू हटाउन मद्दत गर्छ ।
घरभित्र मृत भेटिएका उमेश र सुदीक्षाको घटनाको कारण रहस्यमय
विराटनगर आउँदै गरेका युवक बसभित्रै मृत फेला